မိုးလေဝသ Archives - Lodarya
ဗေဒင် နှင့် ယတြာ
“အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာခြင်းနှင့်အတူ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း သတိပေးချက်”
April 6, 2019 Lodar Ya 0
အချိန် အခါမဟုတ် မိုးရွာခြင်းနှင့်အတူ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း သတိပေးချက် အချိန် အခါမဟုတ် မိုးရွာနိုင်မည့်သတိပေးချက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၅)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်ည(၇:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) “ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၈:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များ အရ အနောက်ဘက်မှလာသော လေအေးများနှင့် ဘင်္ဂလားပင် လယ်အော်မှလာသော လေနွေးများစုဆုံမှုကြောင့် (၆.၄.၂၀၁၉) […]
ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မိုးသီးကျခြင်း သတိထားကြဖို့လိုပြီ
April 3, 2019 Lodar Ya 0
ကြောက်စရာကောင်းသလို သတိထားစရာ အလွန်ကောင်းလာပါပြီ..။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ထူးဆန်းတာလေးတွေ့လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး သဘာဝဘေားဆိုးတွေ အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းလည်း မရေတွက်နိုင်သလို အမျိုးအစားပေါင်းလည်း ရေတွက်လို့ မရဘူးဆိုတာ ကမ္ဘာ့လူသားတိုင်း ငြင်းလို့မရပါဘူး..။ သဘာဝ ဘေးဆိုးများကြောင့် သတ္တ၀ါးပေါင်းများစွာလည်း အသက်ပေး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း ရေတွက်လို့မရနိုင်ဘူး..။ အခုနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ […]
ပင်လယ်ထဲက ရေတွေကို ကောင်းကင်ပေါ်စုပ်ယူနေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
April 2, 2019 Lodar Ya 0
မလေးရှားတွင် ရှားရှားပါးပါး ရေဆင်နှာမောင်းတခု ဖြစ်ပေါ် (ရုပ်သံ) မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ကျွန်းနားမှာ ရှားရှားပါးပါး ရေဆင်နှာမောင်းတခု ဧပြီ ၁ ရက်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေဆင်နှာမောင်းဟာ ကုန်းပေါ်ရောက်မလာခင် ကမ်းရိုးတန်းနားက ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးမိနစ်လောက်ကြာအောင် လှည့်နေတာ မြင်ခဲ့ရတာပါ။ လေစီးကြောင်းနှစ်ခု မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံရာက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လေဆင်နှာမောင်းက ရေပြင်နဲ့ […]
လေးရက်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်…!
April 1, 2019 Lodar Ya 0
လာမည့် လေးရက်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးနီးပါး အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်မှ ရွေ့လျားလာသော လေပွေလှိုင်းများနှင့် အရှေ့ဘက်မှ ရွေ့လျားလာသော လေပွေလှိုင်းများ၏ အရှိန်ကြောင့် ယနေ့ညနေပိုင်းမှ ဧပြီ ၄ရက်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိပ်စိပ်၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ […]
March 28, 2019 Lodar Ya 0
မုန်တိုင်းသတင်း ဧပြီလအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင် လာမယ့်ဧပြီလအတွင်းမှာ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးက ပြောပါတယ်။ တစ်လလုံးမှာလေဖိအားနည်း နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ် နိုင်တာဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်က အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့် မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ ရွာသွန်းမြဲထက် ပိုနိုင်ပြီး တစ်လလုံးအနေနဲ့(၁၂)ရက်ကနေ (၁၈)ရက် အထိ ကြာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ […]
အပူရှိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ထားကြဖို့ ဦးထွန်းလွင် ပြောပြီ…!
March 27, 2019 Lodar Ya 0
အပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောရောဂါဝေဒနာများ မောင်ထွန်းလွင်(မိုးလေ၀သ) နိဒါန်း လူများစွာတို့အတွက်နွေရာသီကာလဆိုတာကျောင်းပိတ်ရက်၊ ရုံးပိတ်ရက်၊ ခရီးသွားရက်၊ အပန်းဖြေရက် ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရပါက လေအေးပေးစက်များတပ်ဆင်ထားတဲ့ ရုံးခန်း၊ အိမ်ဧည့်ခန်းတွေထဲက ပင်နေပူထဲအထွက်များတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထီတွေ့မှုများတဲ့ကာလ၊ အအေးဓါတ်သင့်တင့်အောင်မရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင မှာအနေများတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပူပြင်းလွန်းတဲ့ နေရောင်ခြည်နဲ့ […]
“အပူလွန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ် …အယ်လ်နီညို တကျော့ပြန်လာပြီဟု… ဦးထွန်းလွင် သတိပေး”
March 26, 2019 Lodar Ya 0
တစ်ကျော့ ပြန်ပြီး ဦးမော့လာပြန်တဲ့ အယ်လ်နီညို…မူယာ မာ ယာ တွေပို လွန်းတယ်…၂၅-၃-၂၀၁၉…ည(၈း၁၄)နာရီ။ (၆-၁၀-၂၀၁၈)ရက်နေ့ ကတည်းက တရားဝင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒယာထဲက အယ်လ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာ (၂၄-၁၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှာ အင်အားအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ၀င်ရောက်လာ ကတည်းက […]
ရန်ကုန်အပါအ၀င် ပြည်နယ်တုိုင်း ၁၁ ခုတွင် အချိန်အခါမဟုတ် မုိုးရွာပြီး လေပြင်းတုိုက်ခတ်နုိုင်
March 25, 2019 Lodar Ya 0
ရန္ကုန်အပါအ၀င်….ျပည္နယ္တုိုင်း ၁၁ ခုတြင် …အခ်ိန်အခါမဟုတ္မုိုးရျြာပီး လျေပင်းတုိုက္ခတ္နုိုင်” အေနာက် ဘက္မွ ရြေ့လ်ားလာသော လေပြလှိုင်းမ်ားနွင့် အေရွ့ဘက္မွေရြ့လ်ားလာသော လေပြလှိုင်းမ်ား၏ အရွိန်ကြောင့် ရန္ကုန်အပါအဝင် ဒေသအခ်ို့တြင် နောက်သုံးရက်အတြင်း အခ်ိန်အခါမဟုတ္မိုးရြာမည်ျဖစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနွင့် ဇလေဗဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ျပန်သည်။ ရန္ကုန္တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ စစ္ကိုင်းတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ […]
အမွှာပူးမုန်တိုင်း သြစတေးလျကို တိုက်ခတ်မည်
March 22, 2019 Lodar Ya 0
အမွှာ မုန်တိုင်း သြစတေးလျကို တိုက်ခတ်မည် Friday 22 March 2019. ထရေဗာနဲ့ဗီရိုနီကာဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအမွှာဟာ မကြာခင် နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ သြစတေးလျ နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေပိုင်းဒေသဆွေဆီကို ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လေတိုက် နုန်း တိပေးအဆင့် (၄) တနာရီကို ၁၅၅ မိုင်အထက် […]
March 21, 2019 Lodar Ya 0
မြေငလျင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Thrusday,March 21,2019 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆)နာရီ၊ (၀၇)မိနစ်၊ (၄၁)စက္ကန့် အချိန်တွင် ဟားခါးမြေငလျင်စခန်းမှ အရှေ့မြောက်ဘက် (၂၈)မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း (ဖလမ်းမြို့ ၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၂၀)ခန့်အကွာ) မြောက်လတ္တီတွဒ် (၂၂. ၈၄)ဒီဂရီ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် […]
စနေ သားသမီးတွေအတွက်ကတော့ ဒီနှစ် (၂၀၁၉) ခုနှစ်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အချစ်ရေး ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင် ယတြာ လေးပါ မျှဝေပေးလို“က်ပါတယ်နော် “
“ကြည့်ကြပ် လုပ်ကြ.. အူးအူးတွေနော်.. အိမ်ကမဟေသီကြီးနဲ့ ပြန်ဆုံနေမယ်…”
မြန်မာဆန်ဆန် နေထိုင်ဝတ်ဆင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး(၁ဝ) ခု
သူမနဲ့ ရုပ်ချင်းတစ်ထေရာတည်းတူတဲ့ အစ်မချောချောလေးကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း
“နမူနာဗီဒီယိုနဲ့တင် သွေးပျက်အောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ “မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး”